I-Tracx: Thola Ukuqonda, Khulisa Ukuzibandakanya, futhi Ulinganise Umthelela Nebhizinisi Lakho Lomphakathi | Martech Zone
NgoMgqibelo, July 30, 2016 Douglas Karr
Izinhlangano zebhizinisi ziyaqhubeka nokuvula amandla ezinkundla zokuxhumana. Ukuqapha idumela, ukucela impendulo yamakhasimende, ukuhlinzeka ngokukhangisa ngomlomo, ukukhuthaza okuqukethwe nokunikezwa, ukufundisa nokukhulisa amathemba namakhasimende. Imithombo yezokuxhumana ikunikeza konke - ukutholwa, i-upsell, nokugcinwa.
Ukushesha kolwazi kanye nomqondo osetshenziselwe ukudlulisa amasu omphakathi ebhizinisini kudinga inkundla yokuqapha, yokukala nokwenza amasu ezokuxhumana nabantu.
Isixazululo seTracx sihlaziya siphinde sicwenge inani elikhulu lemininingwane yezwe, imininingwane yabantu kanye ne-psychographic evela kuwebhu yonke yezenhlalo ukuletha ukuqonda okujulile kumakhasimende, izimbangi, kanye nabathonya. Ngemuva kwalokho yenza leyo mininingwane isebenze ngokusebenzisa Injini Yokuncoma Komphakathi eqhutshwa ngumongo, inika amandla ukusebenzisana okuhlakaniphile okuletha imiphumela emihle yebhizinisi.
I-Tracx kwehlukanisa lokhu kube izingxenye ezintathu ezibalulekile - ukuqonda, ukuzibandakanya, nesilinganiso:
Ukuqonda - Inika amandla amabhizinisi ukuthola, ukukhomba nokusebenzisa abanamandla Imininingwane ivumela amabhizinisi ukuthi athole izithameli zawo ngokwendawo, abone izindawo ezidla lubi futhi athole imbudumbudu ngokukhomba kwendawo. Futhi-ke, inika amandla ukulalela kombhalo nokubukwayo kanye nokuhlaziywa kwesikhathi sangempela.
ukuzibophezela - Thola futhi uphathe okuqukethwe okunamandla, hlanganyela kuyo yonke inhlangano, bese uhlela izibuyekezo nezihloko ezifanele nezigxile.
Kukhuluma - Lawula futhi uthuthukise imikhankaso yakho yezokuxhumana, ukhombe iziteshi zomphakathi ezisebenza kahle, uqhathanise imiphumela nomncintiswano wakho, ulandele ukubuya kwakho kutshalo-mali, futhi ulinganise futhi uphathe izinkomba zokusebenza kwangaphakathi.
Cela i-Tracx Demo!
Tags: ibhizinisi lezenhlaloI-tracx